Ireo mpitarika ao amin'ny Lohataona Arabo Lohataona
Olana Fianarana sy tantara
Ny Ejiptiana Mohamed Morsi sy Moammar Gadhafi avy any Lybia dia mpitarika tamin'izany fotoana izany
Nianjera ny tompon-trano, nanjaka ireo mpitondra teo aloha, ary ny olom-pirenena tsirairay dia nanampy tamin'ny fiovana. Ireto ny sasany amin'ireo anarana mifandray amin'ny Lohataona Arabo .
Ny filoha voafidy tamin'ny fomba demaokratika voalohan'i Ejipta dia tonga teo amin'ny fahefana mihoatra ny herintaona taorian'ny niantsoana azy, Hosni Mubarak, teo amin'ny revolisiona an'ny Lohataona Arabo Lohataona Arabo . Morsi dia olo-malaza ao amin'ny Firahalahiana Miozolomana ao amin'ny firenena, izay voarara teo ambanin'ny Mubarak. Ny fitsanganany ho filoha dia heverina ho fitsapana mafy ho an'ny ho avin'i Ejipta. Moa ve ireo revolisionera izay nameno ny kianja Tahrir miantso ny demokrasia sy firenena iray tsy afaka mividy tyranny Mubarak tompon'andraikitra amin'ny fitondrana teokratika izay hampihatra an'i Sharia sy hamoaka ireo Coptic sy ireo sakaizan'i Ejipta?
Na dia tsy ara-politika aza ny natiora, ElBaradei sy ireo mpiara-dia aminy dia namorona ny Fikambanam-pirenena ho an'ny Fiovana tamin'ny taona 2010 hanosehana fanavaozana amin'ny hetsi-panoherana iray manohitra ny governemantan'i Mubarak. Ny hetsika dia miaro ny demokrasia sy ny rariny ara-tsosialy. ElBaradei dia nanolo-tena ho amin'ny fampidirana ny demokrasian'ny mpirahalahy Miozolomana amin'ny demaokrasia Ejiptiana . Nalefa ho mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny anarany, na dia maro aza no nisalasala momba ny fomba nandalovany tamin'ny fifidianana tamin'ny Ejiptiana satria nandany fotoana betsaka niainana tany ivelan'ny firenena izy.
Nisy ny fitroarana tao Arabia Saodita - firaisana amin'ireo vehivavy izay sahy nanatona ny kodiarana ary nitondra fiara, ka nampiakatra ny fehezan-dalàna hentitra ao amin'ny firenena. Tamin'ny May 2011, nalefan'i al-Sharif, mpikatroka ny zon'ny vehivavy iray, Wajeha al-Huwaider, nandroaka ny araben'i Khobar noho ny fandraràna ny fandraràna ny vehivavy ao ambadiky ny kodiarana. Taorian'ny nandefasana ilay lahatsary an-tserasera, nosamborina sy nogadraina nandritra ny sivy andro izy. Izy dia nomena anarana iray amin'ireo olona 100 manerantany TIME manerantany tamin'ny 2012.
Nanjary kolonely tao amin'ny tafika Syriana tamin'ny taona 1999 i Assad. Ny filoha Siriana no nandray anjara lehibe voalohany teo amin'ny politika. Nampanantena izy fa hitondra fanavaozana rehefa nandray ny fahefana izy, saingy maro no tsy nahatontosa izany, niaraka tamin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona niampanga ny fitondran'i Assad ho fanagadrana, fampijaliana sy famonoana mpanohitra politika. Ny fiarovam-panjakana dia mifamatotra mafy amin'ny filoham-pirenena ary tsy mivadika amin'ny fitondrana. Nolazain'ny tenany ho anti-Israeliana sy manohitra ny Tandrefana izy, voatsikera noho ny firaisany amin'i Iran, ary voampanga ho nidaroka tao Libanona. Bebe kokoa "
Malath Aumran no aliasan'i Rami Nakhle, mafana fo mpomba ny demaokrasia Syriana izay nanao hetsi-panoherana an-tserasera nanohitra ny fitondran'i Bashar Assad. Taorian'ny fihetsiketsehan'ny Lohataona Arabo nandritra ny fitroarana Siriana tamin'ny taona 2011, nampiasa Twitter sy Facebook i Malath Aumran mba hitazonana izao tontolo izao manaraka ny famoretana sy ny fihetsiketsehana mitohy. Nibitsika tamin'ny teny Anglisy, nameno ny fahavoazana sarobidy ny fanavaozana rehefa tsy nahazo alalana tao Syria ny media. Noho ny hafanam-pony, i Aumran dia niharan'ny fandraharahan'ny fitondrana ary nanohy ny asany tamin'ny trano azo antoka tao Libanona.
Ilay mpanao didy jadon'i Libya hatramin'ny 1969 ary ny governemanta manerantany fahatelo indrindra indrindra, Gadhafi dia fantatra ho iray amin'ireo mpitondra ambony indrindra eran-tany. Hatramin'ny androany niompana tamin'ny fampihorohoroana tany amin'ireo taona vitsy lasa izay, rehefa niezaka ny ho tsara tarehy amin'ny tontolo izy, ny tanjony dia heverina ho toy ny olana goavana. Novonoina izy rehefa nokaravan'ireo mpikomy nandritra ny diany tany amin'ny tanànan'i Sirte.
Ny filoham-pirenen'i Ejipta tamin'ny taona 1981, fony izy, filoha lefitry ny filoha, dia naka ny toeran'ny governemanta taorian'ny famonoana an'i Anwar Sadat, tamin'ny taona 2011, rehefa nidina izy teo anatrehan'ny hetsi-panoherana mahery vaika manohitra ny governemanta. Ny filoha Ejipsiana fahefatra dia nitsikera ny zon'olombelona sy ny tsy fisian'ny andrim-panjakana demokratika tao amin'ny firenena, saingy koa noheverin'ny maro ho mpiray finoana tena ilaina izy ireo izay nitazona ireo mahery fihetsika tao amin'ny faritra misy azy.
Sarin'i Clarence Thomas
Fihetseham-pon'ny Liberaly Media - famaritana
Fampanantenana nataon'ny Donald Trump tamin'ny Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2016
Ahoana no fiheveran'ny mpiaro ny firazanana any Amerika
Profile of Vice President Michael "Pence" Mike
Nanazava ny ady an-trano Syriana
Glossary: ​​Madrassa na Madrasa
Famaritana ny famerana ny fitsarana
Ny fanjakana liberaly indrindra: Ny toerana ratsy indrindra ho an'ny konservatif
Karazana Conservatives samihafa
10 Ny antony mahatonga ny karama farany ambany dia mety hanimba ny toekarena
Ny mahaliana an'i Nelson Mandela
Revolisiona Amerikana: Battle of Short Hills
Mpanazatra 10 miaraka amin'ny Lalao National Basketball College
6 Zavatra mahasalama amin'ny PHP
Fiantraikany eo amin'ny Styles Home American, 1600 ka hatramin'izao
7 Fanomezana Lehibe ho an'ny Momana
KNIGHT - Famerenana amin'ny anarana sy orinasa
Ahoana no havalina momba ny fanavakavahana mandritra ny fanadinadinan'ny asa
Ping dia manambara Feno andian-tsarimihetsika vaovao, ny G5 Series
Rahoviana ary nahoana ianao no hanova ny feon'ny gitara
Gazety momba ny gazy - inona no misy ary ahoana no anaovana azy
Ireo tsangambato mahazendana
Ny fomba hahazoana mari-pahaizana ambony amin'ny aterineto amin'ny maha-lehibe azy
Ohatra tsy ampy amin'ny fiteny malagasy
Maninona ny rômôma romanina no mihira ny Alleluia mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra?
Famantarana sy fanitsiana ny hadisoana momba ny fifanarahana voafaritra
Fanamarihana ny hazakazaka: NL MVP
Ny fiantraikan'ny tetibola ho an'ny mpampianatra
Ny papa ny Fiangonana Katolika